သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ…
Posted by kai on Aug 17, 2014 in Interviews & Profiles, Myanmar Gazette | 17 comments
သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ = အသက် (၂၀)၊ ဒုတိယနှစ် ဒဿနိကဗေဒ (Philosophy)၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြို့
Q. သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ… ဖိလစ်ပိုင်ခရီးစဉ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ အဲဒီအစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ အစီအစဉ်လဲ… ဘယ်သူကကမကထလုပ်ပေးတာလဲ… ဆိုတာလေးတွေ ပြောပြပေးပါလား ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ…အခုသမီး ၁၅ . ၈ .၂၀၁၄ ကနေ…၂၃ . ၈ .၂၀၁၄ ထိ… ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်.. သမီးကိုHoliday Television Co.,Ltd ကနေစီစဉ်ပေးမှုရယ်.. ဒီကMiss Universe Myanmar Organizationတို့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့သွားရမှာပါ…. ။
Q. ထိုင်းနိုင်ငံ Holiday Television Co.,Ltdက Mr.Nawat Itsaragisilတို့ နဲ့အတူ… Miss Universe Myanmar Organization က စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော် ။ အဲဒီတော့… ဖိလစ်ပိုင်ခရီးစဉ်မှာအစီအစဉ်တွေကဘာတွေပါလဲ။ သူတို့ရဲ့ Training အစီအစဉ်တွေကဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲ ။ အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါလား ။
အဓိကကတော့..သူတို့ကသမီးကိုလမ်းလျှောက်ပုံတွေ သင်ပေးမယ် ။ဒီထက်ပိုပျော့ပျောင်းအောင် ။ပြီးတော့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ကအစအကုန်သင်ပေးမယ် ။ပြီးတော့ မိတ်ကပ်ပိုင်းတို့ဆံပင်ပိုင်းတို့ကအစသူတို့ သေချာသမီးကိုသင်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
Q. လမ်းလျှောက်ပုံဆိုတာ Miss တွေရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအဓိကဖြစ်တဲ့ cat walk လား ။
ဟုတ်ကဲ့ ။ Cat walk ပေါ့နော် …။သမီးတို့ ဒီ Miss ပွဲကြီး … တကယ့်ပွဲကြီးမှာကျရင် စင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ လှလှပပထွက်လာနိုင်အောင် ၊သူ့ ထက်ပိုလှပြီးတော့ ထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့သေချာလေ့ကျင့်ပေးမှာပါ ။
Q. အဲဒီတော့ သူတို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အထဲမှာMiss Universe ပြိုင်ပွဲဟာ အ၀တ်အစားသုံးမျိုးနဲ့ ပြိုင်ရတယ် ဆိုတော့… ပထမက National Costumeနောက်တစ်ခုက Swimsuit နောက်တစ်ခုက Evening Gown ။ ဆိုတော့…Swimsuit နဲ့Evening Gowns ကတော့ နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစဉ်လာမှာအားလုံးလိုလို အတူတူနီးပါးလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သူတို့ကလေ့ကျင့်ပေးကောင်းလေ့ကျင့် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ National Costume နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုများ သျှားထွဋ် စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဥပမာဆိုကြပါစို့ မနှစ်ကဆိုမိုးစက်ဝိုင်ကသူ့ ကိုယ်သူရခိုင်အမျိုးသမီးပုံစံနဲ့ အကုန် ပြင်ဆင်ပြသွားတယ် ။အဲ့တော့…အခု သျှားထွဋ်ကရော National Costume အပိုင်းကိုဘယ်လိုများစဉ်းစားထားလဲ ။
ဒါကတော့ သမီးအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူး ။ အဲဒီတော့ သမီးတို့Organizationနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ သမီးတို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပါတယ် ။ ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ဓလေ့ထုံးစံကိုယ့်ရဲ့မြန်မာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားကိုပဲ….. မနှစ်တုန်းကဆိုမိုးစက်ဆိုရင် ရခိုင် ၊ သူအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြသွားခဲ့ပြီ ။ အခုသမီးကဒီထက် ပို ပြီးတော့ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ် ။ အခုထိအတိအလင်းကြီးတော့မဖြစ်သေးပါဘူး ။ ဟုတ် ။
Q. ပြီးတော့ တခြားMiss ပြိုင်ပွဲတွေကိုသွားပြိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Miss တွေလည်း သျှားထွဋ်ရှေ့မှာ ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲ..သွားရောက် လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာတွေ့ ရတယ် ။ အဲဒီတော့ လမ်းလျှောက်ပုံ၊ Hair , Dressing ,Make-Up … ဒါတွေအပြင်ဘာတွေများထပ်စီစဉ်ထားသေးလဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ Miss Universeပြိုင်ပွဲတွေကျရင် … Make-up တို့Hair, Dress တို့ဘယ်သူမှလာလုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူး … မိတ်ကပ်ပညာရှင်လည်းခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ် ရတော့မှာဆိုတော့ ဒီဖိလစ်ပိုင်ကဆရာတွေက Cat Walkရယ်..Hair ,Dressရယ်… Make-up ရယ်အပြင် ဘာများနောက်ထပ်… စီစဉ်ထားသေးလဲ။Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ …သူတို့ဘယ်လိုများ Training ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးလဲ…
သူတို့ကတော့…အဓိကသမီးကိုပြောတဲ့ ထဲမှာတော့…လမ်းလျှောက်ပုံအပိုင်းကိုသူတို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ တခြားကတော့စကားပြောပုံဆိုပုံကအစ…ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အချိန်လေးစားဖို့ကအစအစစအရာရာပေါ့နော်…ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာအဆင်ပြေအောင်လူတွေနဲ့ ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုဆက်ဆံမယ်ကအစပေါ့နော်… သင်ပေးမယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ။
Q. သြော်…နေပုံထိုင်ပုံကအစTraining ပေးမယ်ပေါ့
ဟုတ်ကဲ့..သူတို့ သေချာ Training လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် ။ သမီးကဒီရန်ကုန်မှာလည်းကိုယ့်ကိုဒီလို Training လုပ်ပေးနေတဲ့သူရှိတော့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပ်ပြီးတော့ စိုးရိမ်မှုမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လမ်းလျှောက်ပုံအပိုင်းကိုတော့ သူတို့တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ International အတိုင်းဖြစ်အောင်သမီးကြိုးစားရဦးမယ်.. ။
Q. နောက်ပြီးတော့…Miss တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေ ရှိတယ် ။ ဒီMiss တွေ Intelligence ပေါ့။ ဘယ်လောက်ဥာဏ်ပညာထက်မြတ်လဲဆိုတာကိုဥာဏ်ပညာစွမ်းရည်ကိုစူးစမ်းမေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းမျိုးအတွက်ကရောသျှားထွဋ်အနေနဲ့ ဘယ်လို ပြင်ဆင် သွားဖို့စဉ်းစားထားလဲ။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ သိထားတာက သျှားထွဋ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုTraining သွားဖို့ မတိုင်မီမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပြုပြင်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ အဲဒါဘယ်လို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို ပြုပြင်ခဲ့သလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပရိသတ်သိအောင်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါ ။ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲ ။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲပေါ့
မှတ်ချက်။ ။ အင်တာဗျုးသူမှ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လာသော အသံဖိုင်မှဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
အော……… ဆန်းဒေးမှာ သဂျီး ဆားချက်နေပါလား
နောက်ခါ ဗျူးတာကို နည်းနည်းလျှော့ပြီး
ဟော့တာလေးတွေ များများ ထည့်ပေးဗျာ …
အခုနောက်ပိုင်း သတင်းတွေက စနစ်ပြောင်းလာဘီ ..
သဂျီးလည်း ပြောင်းဖို့ သင့်ဘီ …
သူကြီးခင်မျာ ..သူကြီးကတော် ဆူမှာစိုးလို့ သူဘာမှ မသိပါဘူး စတိုင်နဲ့ ပုံမှားထည့်ထားသေး ..
သူတင်ထားတဲ့ ထိပ်ဆုံးကပုံက ဇွန်သံစဉ် ပုံ မဟုတ်လား ….
ဘယ်​​မော်​ဒယ်​ ဘယ်​မင်းသမီးဖြစ်​ဖြစ်​ အင်​တာဗျူးဆိုရင်​ ဒီ​လေသံပဲ အ​ပြောင်းအလဲ မရှိ ……..
ဗျူးတာက အဆုံးထိလည်း မပါဘူး။
အဆုံးထိ ဖတ်ချင်ရင် သဒါဇင်းမှာ ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီ ဗျူး ပါတဲ့ သဒင်းစာတစ်စောင်
အဲ့ဒီ Sharr လေးကို အသံရော ရုပ်ရော ဂျစ်မိသွားလို့။
အဲ . . . စိတ်နေသဘောထားကြီးကို မဂျစ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ချင်တယ် အဲ ဖတ်ချင်တယ်
ဟိုပေါ့နော်….ဒီ ပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော်။
ဘယ် တစ်ယောက်တုန်း ဟမ်?
ခေတ် နဲ့ မက်ခြေပြတ်ပြီး အာလဖွားဂျီး ဖြစ်သွားပါပကောလားးး
ဟုတ်ကဲ့ရှင့်… သာမီးကတော့ ဘယ်မှမသွားသေးဘူးပေါ့နော်…
သွားပေါ့လား သွားဖို့တော့ ရှိတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော်…. ဘယ်လိုပြောရမလဲ… ခေါ်မယ့်သူမရှိသေးတာလဲ ပါတာပေါ့နော်… မီးကတော့ သွားချင်တာပေါ့…
ခုလုပ်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကတော့ သာမီးရဲ့ဝမ်းစာအတွက် ကိုယ်တိုင် ရုန်းကန် ရှာဖွေစားသောက်နေတာပေါ့နော်… စပွန်ဆာ မရှိတော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ့….. ခုတောင် သာမီးက သိပ်အားတာမဟုတ်ဘူး။ မအားတဲ့ကြားက ဖြေရတာဆိုတော့လေ… သိတယ်မလား… သာမီးက အရမ်း အရမ်း ပြောချင်နေလို့ပါရှင်….
သဂျီး တင်လာလို့ ဖတ်ရလို့သာ သူအကြောင်းသိရတာလေ အရင်ကဘာမှသိဘူးဗျ